Ọ bụghị naanị gị na mgba na nchịkọta | Martech Zone
Anyị na-nyere Nkọwa nke nchịkọta yana edepụtara niile nke ntanetị n'ịntanetị nchịkọta ị nwere ike ịchọta iji nyere gị aka ịlele mmetụta nke usoro azụmaahịa gị. Dịka ị pụrụ ịhụ site na ụfọdụ ọnụọgụ dị n'okpuru, agbanyeghị, ndị na-ere ahịa na-aga n'ihu na ọgụ na mgba nchịkọta nhọrọ na nsonaazụ. Ekwenyere m na isi ihe a bụ na nchịkọta na-enyekarị ọtụtụ ozi, na-enweghị inye ndụmọdụ ọ bụla maka ihe ngwọta.
As nchịkọta ngwanrọ na - abawanye n’ihu, na - eme ka uche nke data niile dị ka ọrụ na - agwụ ike; mana azụmaahịa kwesiri inwe ike ịlele ndị whos, kedu, ihe ha jiri mee, na ụzọ ha ga - azụ ahịa iji mee ka ebum n’uche ahia ha na otu esi aga nke ọma. Via Mainstreethost
Lee ndị na-akpali akpali marketing nchịkọta ọnụ ọgụgụ enyere site na infographic:
Ndị CMO na-akọ na ha na-emefu 8% nke ahia ahia ha na nchịkọta ahịa.
Site na 2015, ahia nchịkọta emefu ego ga-abawanye site na 60%.
N'afọ gara aga, Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi nke jikọtara karịa ọwa ntanetị 4 emeputara otu uzo ma obu uzo abuo site na 300%.
40% nke nnukwu ụlọ ahịa ahịa dị mgbagwoju anya ga-emepewo a ijeụkwụ-layered obibia ka integrated ahịa.
60% nke ndị na-ere ahịa na-achọ nhọrọ nyocha na ha ihe nlekota oru mgbasa ozi.
Ọkara ụlọ ọrụ niile na-agba mbọ iji weghara ma nyochaa ozi nke ọma site n'ọtụtụ ọwa mgbasa ozi mmekọrịta.
Ikpeazụ-pịa àgwà bụ usoro ihe atụ kachasị na nsonaazụ mgbasa ozi.
Tags: analysisnhọrọ nyochaAnalyticsmmefu egonchịkọta nchịkọtaAttributionakuko mkpọsamkpọsa mkpọsaIkpeazụ pịa njirimaranchịkọta ahịaọnụọgụ nchịkọta ahịa